ịrịba isiokwu iche iche na nkwado. Saịtị dị ka Okwu bụ ihe kachasị amasị m ebe m nwere ike ịchọta ndebiri dị ịtụnanya na obere ego anyị nwere ike ime ma wulite maka ndị ahịa anyị. Anyị anaghịdị enye isiokwu isiokwu ebe ọ bụ na anyị nwere ike iwuli elu na a nwa isiokwu ma chee atụmatụ nne na nna niile dị ịtụnanya. Enwere ike iwu saịtị ndị pụrụ iche na obere oge.
Ngwa na mwekota iche iche na nkwado. N'ihi na ọtụtụ saịtị na-agba WordPress, ọ bụ ihe dị mkpa maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ ọ bụla chọrọ ijikọ na sistemụ njikwa ọdịnaya. Site email mgbere, CRM, ọdịda peeji nke ngwọta, wdg… ọ fọrọ nke nta ike ịchọta ụlọ ọrụ na-adịghị ike.
Sales - WordPress ejiribu bullish na ihe ọ bụla ahịa metụtara ọrụ, isiokwu, ma ọ bụ mgbakwunye. Ha na-egbochikarị onye ọ bụla iwepụta ngwaọrụ n'ime sistemụ ha nke nyere ọnụahịa ego na ya. Ma ugbua, oburu na iwebata Jetpack, zutere gị ozi nag zụrụ ọrụ nkwado ndabere nke Automattic. Yabụ, na mberede ndị na-akwado ụzọ mmalite na-erezi ọrụ ha. Enweghị m obi ụtọ na ha na-eme nke a, ọ bụ naanị na ọ na-adịbu ya njọ.
Development - Enwere m onye ahịa nwere saịtị yana ụdị setịpụrụ plugins ugbu a nke nwere ihe ntinye 8 Google Akara ókwú na isi ha n'ihi na isiokwu ha na otutu plugins imewe ha nile na-enye ya dika oru. Agbanyeghị na enwere usoro iji hụ na akpọghị ọrụ karịa otu ugboro, ndị mmepe leghaara ya anya wee tinye amaokwu nke ha. Nke a na-ewute saịtị ahụ maka ọsọ na ogo… ma ọ bụghị ihe onye ọ bụla onye ọrụ ga-amata na-enweghị nsogbu. Omume na-adịghị mma na WordPress API mwekota na-abụwanye ihe nkịtị. Enwere m ọtụtụ tiketi na-emeghe na ndị mmepe iji dozie nsogbu ndị a. Ọtụtụ na-anabata, ọtụtụ anaghị aza.
Esemokwu - typicaldị ihu akwụkwọ na WordPress nwere ike ịnwe atụmatụ sitere na wijetị, menus, ntọala saịtị, ntọala isiokwu, na ntọala mgbakwunye. Oge ụfọdụ, idezi ihe n’otu peeji, m na-etinye nkeji iri atọ n’ịchọ ọnọdụ m! Ọ na-ewute na WordPress arụbeghị usoro kachasị mma iji hụ na ndị mmepe etinye ntọala ha ebe ọ dị mfe ịchọta ma melite.
Squarespace - maka onye na-abụghị teknụzụ na-eme ya-onwe gị, echeghị m na enwere CMS ka mma karịa Squarespace. Enwere m otu onye ahịa nke wuru saịtị ha n'ime izu ole na ole na-enweghị ahụmịhe ọ bụla na nsonaazụ ahụ mara mma. Anyị nyeere tweak na-akụ na saịtị ahụ, mana mmejuputa WordPress agaghị enwe mmejuputa otu oge. Ebe nrụọrụ gara aga bụ WordPress na nchịkwa ahụ siri ike maka ndị ahịa ịnyagharịa na imelite. Ha nwere nkụda mmụọ na mbụ, ma nwee obi ụtọ ugbu a! Na Squarespace na-enyekwa ihe ecommerce.
Obi ọjọọ - uzo ozo nke N'onwe Gị nke na-aga n’ihu n’ihu ma ju anyi anya na njirimara ya bara ụba, gunyere ecommerce. Ọ dịbeghị mgbe anyị jisiri ike inweta ndị ahịa, mana usoro ntinye nke Weebly sara mbara nke ukwuu ma yie ka ọ nwere ihe niile chọrọ.
Enwere ndị ọzọ nọ ebe ahụ dịka Wix ma ọ bụ ụfọdụ proprietary CMS usoro. Wix nwere ụfọdụ nsogbu na Google na-edepụta saịtị ha mana ọ rụsiri ọrụ ike iji mee ka saịtị ha nwekwuo njikarịcha nchọta yana saịtị ha yana ndị ọzọ edepụtara ebe ahụ. Enwebeghị m ahụmịhe ọ bụla na Wix n'afọ ndị na-adịbeghị anya yabụ agaghị m ekpe ya ikpe ebe a.
Anyị na-elekwa anya na ndị na-adabere na ya. Ọ bụrụ na CMS enweghị ikike nke mbupụ ma ọ bụ mbubata na usoro ntụgharị, ọ nwere ike ịbụ ihe kpatara nchegbu. Were ya na ụlọ ọrụ gị na-arụ ọrụ na CMS ruo ọtụtụ afọ, na-ewu ikike na injin nchọta, yana na-ebugharị ọtụtụ ntụgharị naanị iji chọpụta na ị na-emejuputa CRM ọhụrụ nke anaghị akwado site na njikọta ọ bụla. Ndị otu gị kpebiri na ọ chọrọ ịkwaga ma CMS anaghị enye ngwaọrụ ọ bụla iji mee nke a.
Anyị ahụwo nke a ọtụtụ oge - ebe a na-ekekọta ụlọ ọrụ ma kpọchie ha n'ime ndị na-ere ha. Ọ na-akụda mmụọ na ọ dịghị mkpa. Nnukwu onye na-eweta CMS nke nwere ntụkwasị obi n'onwe ya ga-enye ụzọ iji kwaga ma ọ bụ gbanyụọ ya kama ịnwa ịgbachi ndị ahịa ya.